के युरोपमा कोभिडको अर्को लहर आउन लागेको हो ? | We Nepali
नेपालको समय: २२:१२ | UK Time: 16:27
के युरोपमा कोभिडको अर्को लहर आउन लागेको हो ?
२०७८ मंसिर २ गते २०:३५
लण्डन । युरोपमा जाडो याम बढ्दै जाँदा कोरोना भाइरस संक्रमणको संख्या बढ्दै गएको छ भने विभिन्न मुलुकहरुले कोभिड संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्नका लागि विभिन्न प्रावधानहरु लागू गर्न थालेका छन् ।
बिहीबार मात्र जर्मनीमा ६५ हजार ३७१ जना संक्रमित भेटिएका छन् भने बेलायतमा ४६ हजार ८०७ जना संक्रमित फेला परेका छन् ।
जर्मनीमा आजै पत्रकार सम्मेलन गर्दै चान्सलर एन्जेला मर्केलले भनेकी छिन्, ”हामीहरु गम्भीर संकटतर्फ गइरहेका छौँ । यदि हामीले कोभिड नियन्त्रण गर्न कुनै उपाय नअपनाउने हो भने सबैभन्दा नराम्रो क्रिसमस हुनेछ ।”
जर्मनीमा क्लव, बार, ठूला कार्यक्रमहरुमा नियन्त्रण गर्नका लागि छलफल भएको छ भने सिनेमा, रेष्टुरेन्ट र बारहरुमा खोप नलाएका मानिसहरुलाई प्रवेशमा नियन्त्रण गर्न शुरु गरिएको छ ।
उता बेल्जियममा मास्क लगाउन अनिवार्य गरिएको छ भने सातामा चार दिन मात्र काम गर्न थालिएको छ । मानिसहरुले कफी पसल, रेष्टुरेन्ट र नाइट क्लवमा प्रवेश गर्न खोप लगाएको प्रमाणको साथै कोभिड जाँचमा नेगेटिभ आएको देखाउनु पर्ने भएको छ ।
उता नेदरल्याण्डसमा पनि गत सातादेखि नै आंशिक लकडाउन गर्न शुरु गरिसकिएको छ भने विद्यालय पनि आंशिक बन्द गरिएको छ । खोप नलगाएका मानिसहरुलाई घरभित्र हुने कार्यक्रमहरुमा प्रवेश नदिने प्रस्ताव त्यहाँको सरकारले ल्याएको छ ।
उता चेक रिपब्लिक र ग्रीसमा पनि सोमबारदेखि खोप नलगाएका मानिसहरुलाई रेस्टुरेन्ट, सिनेामा र जिमहरुमा प्रवेश निषेध गरिएको छ ।
स्वीडेनमा खोप लगाएका मानिसहरुलाई मात्र घरभित्र हुने कार्यक्रमहरुमा प्रवेश दिन थालिएको छ भने त्यस्ता कार्यक्रमहरुमा बढीमा १०० जना मात्र सहभागी हुन पाउने नियम बनाइएको छ ।
स्लोभाकियामा खोप नलगाएका मानिसहरुलाई सोमबारदेखि लकडाउन लागू गरिएको छ । पछिल्ला ६ महिनामा कोभिड संक्रमण भएका र पूरा डोज खोप लगाएकालाई मात्र रेस्टुराँ, सपिङ मल र सार्वजनिक कार्यक्रममा जान पाउने नियम बनाइएको छ ।
अष्ट्रियामा पनि खोप नलगाएका मानिसहरुलाई लकडाउन लागू गरिएको छ ।